केटाहरु अविवाहित भन्दा विवाहित महिलाप्रति किन पर्छन् लठ्ठ ? - Mitho Khabar
July 7, 2020 mithokhabarLeaveaComment on केटाहरु अविवाहित भन्दा विवाहित महिलाप्रति किन पर्छन् लठ्ठ ?
समयको परिवर्तन सँगसँगै मानिसहरुको सोच पनि परिवर्तन हुने गरेको छ । आजको समाज समय सँगसँगै धेरै बदलिसकेको छ । आजका युवा वर्गहरु यस मामिलामा सबैभन्दा अगाडि रहेका छन् । युवा पुस्ताले यसो किन गर्छन् त ? यसको वास्तविक कारण के हो ? युवा पुस्ताले प्रसन्न गर्ने कुराहरुमध्येको यो पनि एउटा रुचाइएको पाटो हो । सायद जो कोहि युवावर्गले यसलाई महशुस गरेका छन् ।
युवापुस्ताले रुचाउने कुराहरुको लिस्टमा लाइफ पार्टनर पनि पर्ने गर्छ । तर धेरै युवाहरुको रोजाई बिहे भएका महिलामा हुने गर्छ । युवायुवतीहरुको अध्ययन गर्ने फोब्र्सको यो खोज साँच्चिकै यथार्त पनि हो । फोब्र्सले गरेको अनुसन्धानमा अहिलेका युवा पुस्ताहरुले विवाह नभएका युवतीहरु भन्दा विवाह भएका महिलाहरु धेरै रुचाउने गरेको तथ्य फेला पारेको छ ।
यति मात्र युवाहरु युवतीहरुसँग भन्दा विवाह गरेका महिलाहरुसँग डेटिङ जान रुचाउने गरेको तथ्य पनि फेला परेको छ । युवा पुस्ताहरुले विवाह गरेका महिलाहरु किन धेरै रुचाउने गर्छन् त ?
अनुसन्धानका अनुसार युवापुस्ताहरुले सबैभन्दा पहिला विवाहित महिलाहरुमा हुने सेल्फ कन्फिडेन्सलाई मन पराउने गर्छन् । यथार्तमा पनि एक अविवाहित महिलाको भन्दा विवाहित महिलामा सेल्फ कन्फिडेन्स धेरै हुन्छ । पुरुषहरुले विवाहित महिलाहरुमा समझदारीका साथसाथै पुरुषको कुराहरु पनि स्वतः बु्झ्ने गर्छन् भन्ने बिश्वास गर्छन् ।
यस कारण पनि पुरुषहरुले विवाहित महिलाहरु बढी रुचाउँछन् कि उनीहरुले विवाहपछि पुरै धान्ने गर्छन् । विवाहित महिलाहरुको विवाहपछि धेरै हर्मन बढ्ने गर्छ । जसको कारण उनीहरुको शरिरको आकार बढ्ने गर्छ त्यसले गर्दा पनि पुरुषहरुले विवाहित महिलाहरुलाई धेरै रुचाउने गरेको अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसका साथै विवाहपछि महिलामा परिवर्तन हुने मिठास बोलिले युवाहरुको ध्यान तान्ने गरेको पनि अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा
आज २०७७ भदाै २६ गते शुक्रबारकाे राशिफल आज यी राशिकाे भाग्य यस्ताे रहेकाे छ !
September 19, 2020 mithokhabar
सुहाना थापाको यस बर्षको दशैं आफ्ना पिता र आमा झरनाको साथमा [फोटो सहित]